Month: December 2019 - Page 3 - Kichuu
Obsi keenya waanuma gaarii fidaa jira; Yaasoo Kabbabaa Hordofaa, Baga nagaan hidhaa cubbuu keessaa baate!
Obsi keenya waanuma gaarii fidaa jira; Yaasoo Kabbabaa Hordofaa, Baga nagaan hidhaa cubbuu keessaa baate,Warri hafaniis akka hiikaman iyyannaan keenya itti fufa! Dábessá Gemelal #Viidiyoon gabaabduun tun, Kibba Baha Oromiyaa Godina Arsii Ona Diksis gadda Barataa [Read More]
Hireen akkanaa akka Oromiyaa keessatti dhufuuf gootota wareegamaniif YAADANNOO haa ta’u!
Hireen akkanaa akka Oromiyaa keessatti dhufuuf gootota wareegamaniif YAADANNOO haa ta’u! Warri bifa kanaan walfuutanis, gaa’illi keessan kana milkii fi kan eebbaa haa ta’u!! የወላይታ ሕዝባዊ ትግል ግቡን ይመታል። ይዘገይ ይሆናል እንጂ እንደ ሲዳማ ዋጋ [Read More]
Baratootta Yunversiity Amboo Kaampaasii Awwaaroo Polisiin haala kanaan reebaa jira.
Baratootta Yunversiity Amboo Kaampaasii Awwaaroo Polisiin haala kanaan reebaa jira. Naannoo Amaaraatti Ajjeefamaaf Oromiyaa keessatti hidhamaa,Reebamaa fi Barumsarraa Arii’amuu Ijolleesaa Oromoon callisee Ilaaluunsaa baay’ee nama dhiba. Bor rakkinni tokko yoo dhufe hundinuu yeroo isaan waammatu [Read More]
Nuti tokko: WBO fi PO/Humna Addaa Oromiyaa!!
Nuti tokko: WBO fi PO/Humna Addaa Oromiyaa!! Eebba poolisii Oromiyaa Awaash Bishoolaa . (BDhKMNO Muddee 19/2012)-Sirna eebbaa poolisii Oromiyaa giddu gala leenjii Poolisii Awaash Bishoolaatti gaggeeffamerratti Komiishinarri Komiishiinii Poolisii Oromiyaa Kaffiyaaloo Tafarraa leenjii bifa addaatiin [Read More]
Paartiileen Amaaraa hundi alaabaa lummuxii qabatu. Boordiin Filannoo sababa saniif homaa itti hin dubbanne. Alaabaan kun kan ABO ta’uu Oromoon hunduu beeka. Oromoo qofa miti halagaanuu beeka. Biyyoonni addunyaayyuu beeku. Alaabaan ABO biyyoota akka USA [Read More]
Breaking News : Activist and long-time OMN contributor Girma Gutema will replace Jawar Mohammed Sources have disclosed to FI that Activist and long-time OMN contributor Girma Gutema will replace Jawar Mohammed as Executive Director of Oromia Media Network following the decision [Read More]